Alexander Pope. Chiitiko chekuzvarwa kwake. Zvidimbu zvemabasa ake | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo waAlexandre Pope paNational Portrait Gallery muLondon. NaMikael Dahl.
Alexander Pope akazvarwa pazuva rakaita nhasi London. Munyori, munyori wenyaya uye mushanduri, inoonekwa se nyanduri akakosha wezana ramakore rechi XNUMX Chirungu. Aive wepanguva uye shamwari yevanyori vakaita saJonathan Swift. Pakati pemabasa ake anozivikanwa pane ake Nziyo dzevafundisi. Ichi ipfupi snippet sarudzo wavo.
2 Zvimwe zvidimbu zvemabasa ake
2.1 Kubva kuna Eloísa kuenda kuAbelardo (kutanga)
2.2 Elegy kumurangariro wemukadzi (chidimbu)
2.3 Iyo Yakabiwa Curl (chidimbu)
Akazvarirwa mukati 1688, akatanga kunyora nhetembo mune yake mwana. Yavo Nziyo dzevafundisi, rakabudiswa muna 1709, raive rake premiere mukuru mumabhuku. Atozivikanwa semunyori, akaenderera nemabasa senge Elegy kumurangariro wemukadzi, Heloise kuna Abelard, Iyo yakabiwa curl o Rondedzero pamurume. Yakashandurwa Iyo Iliad y Odyssey uyezve aive munyori we Isaac Newton epitaph.
Kukanganiswa ne tuberculosis uye a kusasimba kwemuviri izvo zvakaratidza hupenyu hwake, aida kuzviitira nezvakawanda tarenda, ingwaru uye hukuru hwepfungwa hwehukama. Shamwari dzake dzaisanganisira John Gay uye Jonathan Swift, waakasika naye kuungana Kirabhu yeScriblerus muLondon.
Zvimwe zvidimbu zvemabasa ake
Kubva kuna Eloísa kuenda kuAbelardo (Kutanga)
Kubva pane aya maseru anotyisa uye kwakadzika kusurukirwa
uko iko kufungisisa kwekudenga kunozorora,
uko kunyongana chaiko kunotonga,
Ndezvipi zvinokatyamadza zvevhestal veins zvinoratidza?
Sei pfungwa dzangu dzichitiza kubva kumashure uku?
Sei moto wakavanda uchipisa mumoyo mangu?
kukanganisa ndiAbelardo, kana ndichiri kuda,
uye anofanirwa kutsvoda zita rake, zvakadaro, Heloise.
Inouraya uye inodiwa zita! chakavanzika chinoramba chiripo
yemiromo iyi yakavharirwa nekutenderera kutsvene;
moyo wangu, uvanze ndiko kuvanza kwaro kwepamoyo,
iko kwakasanganiswa naMwari pfungwa yake yaanoda iri;
zita rinoitwa kuti rionekwe -ah, usanyora, ruoko rwangu-;
Yakazara yatoziviswa-misodzi yangu inoibvisa! -
Heloise akarasika, hazvina chinhu kuti ndinochema uye ndinamate,
mwoyo wake uchiri kuraira, uye ruoko rwake runoteerera.
Elegy kumurangariro wemukadzi (chidimbu)
Ah nguva dzose akanaka, gara une mutsa, ndiudze
Kuda zvakanyanyisa, kudenga, imhosva here?
Kuva nemoyo munyoro, kana kusimba?
Tamba chinzvimbo chemuRoma kana mudiwa?
Hakuna kudenga here iko kwakajeka kudzoreredzwa
kune avo vekufunga kwakanaka kana kufa kweushingi?
Iyo yakabiwa curl (chidimbu)
Iyi nymph, yakagadzirirwa kuparara
Kubva pahunhu hwedu, yakadya
Makona maviri, ayo ane pilgrim nyasha
Shongedzo yakanaka yakweretwa
Kune chando kumashure mumasango akanaka;
Mambure uye cheni kumoyo une rudo;
Uye kana kuona kuchiitika nguva dzese
Nemurume mutete wekubatidza shiri: Kana iwe, iwe, rudzi rweumambo rwemunhu, rumbidza;
Kuti chirukwa chegoridhe chinomusunga,
Uye blazon rakanaka,
Chii chiri chesimba rake rakakura pfupi,
Murume anotyaira nebvudzi.
Makutu murume anofara anoyemura,
Cherekedza uye unyarare, uye chayabata ichiyamwa;
Uye kutsunga kuhwina, nzira inoenda
Pasina kukanganwa hunyengeri kana hupombwe;
Uye kwenguva refu pamberi paPhoebus nyika inonamira,
Mwoyo wake unomuraira kuti ateterere
Kune vanobatsira kudenga, uye vanonamata chaizvo
kuremekedza kuteterera rudo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Alexander Pope. Chiitiko chekuzvarwa kwake. Zvimedu zvemabasa ake